Xiisadii siyaasadeed ee Jigjiga miyey dagtay mise waa la isku maqan yahay? – Kismaayo24 News Agency
Xiisadii siyaasadeed ee Jigjiga miyey dagtay mise waa la isku maqan yahay?
by Mohamed Abdirashid Abaajo 28th January 2019 083
“Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa kullan wadatashi ah la qaatay madaxweynaha deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafe Muxumed Cagjar iyo gudoomiyaha xisbiga Axmed Shide. Wadahadalka ayaa diiradda lagu saaray arrimo ay kamid yihii horumarka iyo ammaanka gobolka, waxaan Abiy Axmed uu ku dhawaaqay inay wada shaqeyn doonaan, si loo xoojiyo horumarka deegaanka” .
Ilo ku dhaw labada dhinac ayaa sheegay in aysan jirin wax rasmi ah oo la isku afgartay, balse lagu heshiiyay in 30-ka bisha Janaayo la isugu yimaado magaalada Jigjiga, si halkaasi looga sii amba qaado arrimaha xisbiga, oo khilaafka ugu badan ee labada dhinac uu ku salaysan yahay.
Image captionAxmed Shide iyo Madaxweyne Mustafe Cagjar
Guddoomiyaha xisbiga, Axmed Shide ayaa markii madaxtooyada Itoobiya uu kula kulmay Mustafe Cagjar waxaa la sheegay in uu ballan qaaday in uu la shaqeyn doono madaxweynaha deegaanka, balse dadk indha indheeya siyaasadda waxay aaminsan in mid walba uu u tafaxeedanayo doorashada xisbiga iyo sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa xubnaha kamid noqonaya xisbiga.
”Waxa la isku hayo waa awoodaha iyo sidii loo maareyn lahaa, ra’iisul wasaraha dalkana waxaa muuqata in uu yiri waxa la isku hayo soo khilaafka xisbiga ma ahan? Haa, doorashada xisbiga dhaqso hala qabto, waxaana hadda muuqato in doorashadii la isku diyaarinayo”.Sidaasi waxaa u sheegay Ciid Badal Maxamad oo ka faaloda arrimaha siyaasadda geeska Afrika.
Hal shaqsi ayaa faa’idada ugu badan ka helay shirka dib u heshiisiinta Garowe
DegDeg: Xukuumada Somaliya oo ku war galisay Milkiilayaasha Hotelada Muqdisho in aan lagu qaban karin shirar looga soo hor jeedo Dowlada.
gurey 18th December 2017
Maxaad Ka Taqaanaa Xanuunada Sababi Karo In Qofka Neefta Afkiisa Soo Urto?